Balmaceda Glacier, Balmaceda Ice Box - Puerto Natales
Amerika Atsimo Shily Puerto Natales
Adiresy: Valam-pirenena Balmaceda, Puerto Natales, Chilie;
Haavo: 2035 m.
Iray amin'ireo toetran'ny National Park Bernardo O'Higgins ny balala Balmaseda. Ny hahatongavana amin'izany dia mendrika ny hahatsapa ny fahatsapana mahatalanjona, na dia eo aza ny lalana sarotra sy ny halafon'ny fitsangatsanganana. Ny toerana toy ny hatsaran-tarehy voajanahary dia tsy nanelingelina noho ny fihanaky ny sivilizasiona, dia mbola kely dia kely.
Balmaceda Glacier - famaritana
Ny glacier vertikale avy any Balmaceda dia midina any amin'ny làla-maherin'ny 2035 m. Avy eo dia misy lozam-pandrefesana goavambe midina mankany amin'ny ranomasina. Izay miseho eo anoloan'ny mason'ny mpizahatany dia ampahany amin'ny ampahafolon'ny habetsaky ny glacier, ny sisa dia miafina eo ambany rano.
Alohan'ny hitsidihan'ireo mpizahatany Balmaceda, toy ny hoe manapaka tendrombohitra iray, dia voahodidin'ny arabe maitso daholo ny lafiny rehetra. Io dia rafitra iray amin'ny riandrano, mazoto miditra ao amin'ilay bisy. Ny fiantraikan'ny kontinanta ao amin'ny Antarctica dia tena lehibe tokoa, satria any amin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao amin'ny toerana malalaka, dia tsy misy ranomandry.
Manao ahoana ny fitsangatsanganana eny amin'ny loharano?
Fiantombohana dia manomboka aloha ary mitohy mandritra ny tontolo andro, ka rehefa tonga any Puerto Natales dia tokony hifidy hotely mety ahafahanao mijanona. Soa ihany fa tsy sarotra ny manao izany, ny tanàna dia manana hotely ampy, lamaody sy tsy lafo.
Ny andron'ny fitsangatsanganana mankany amin'ny balisy Balmaseda dia manomboka amin'ny sakafo maraina ao amin'ny hotely, ary avy eo dia misy famindrana voalohany mankany marina. Ny ora fohy farafahakeliny dia 4 ora, raha mieritreritra fa mitsahatra ilay sambo. Mandritra ny fijanonan'ny mpizahatany dia asehon'ny mpanjanaka vorona sy riandrano mahafinaritra. Eto ianao dia afaka mahita sy mamorona sary tsy hay hadinoina ireo zanatan-tsisim-borona, kormorants ary solontenan'ny biby faobe, izay tia kokoa ny mari-pana. Rehefa tonga eo amin'ny glacier, i Balmaceda dia afaka hankafiziny ny manodidina, avy eo ny fihodinan'ny glacier serrano tsy dia lehibe.
Ny fitsidihana an'i Glacier Balmaseda dia zava-mahagaga iray izay manokatra tanteraka an'i Shily amin'ny lafiny hafa. Raha tokony ho ny zavamaniry mampihorohoro, ireo mpizaha tany dia miara-dalana amin'ny riandrano, fiaramanidina ary ranomandry. Mijanona fotsiny mba hahafantarana ny hatsaran-tarehin'ny faritra rehetra ary hankafy ny halehibeny.
Ahoana ny fandehanana any amin'ny glacier?
Ny lalana mankany amin'ny glacier an'i Balmaceda dia avy amin'ny tanànan'i Puerto Natales . Ireo mpizahatany dia nentina an-tsambo tamin'ny alàlan'ny fiaramanidin'i Ultima Esperanza, izay midika hoe "fanantenana farany". Ny anarana mahavariana toy izany dia nahatonga ny fiaramanidina ho fanomezam-boninahitra ny fitsangatsanganana, izay niezaka niampita ny làlana mankany amin'ny Oseana Pasifika. Ny fomba fijery misokatra mandritra ny dia an-dranomasina dia tena malaza.
Ny Hoalan'ny Fanantenana Farany
Chemotherapy ho an'ny homamiadan'ny havokavoka
Fampiofanana ny vestibular fitaovana
Soup gazpacho - recipe
Hyperplasia ny placenta
Mamboly eo amin'ny masony
35 sary vintage izay tsy tianao hijery indroa!
Lotion ho an'ny fitomboan'ny volo
T-shirt ny vehivavy
Niresaka momba ny "fifandraisany" amin'i marijuana i Charlize Theron
Tavoahangy ranom-boankazo amin'ny ronono ao amin'ny multiwark
Inona no nofinofin'ny siramamy?
Hividy legioma ao anaty lafaoro
TOP-25 amin'ireo ray aman-drenibe faralahy manerana izao tontolo izao
Modely amin'ny akanjo hariva 2013
Porofody fingotra ambanin'ny hazo
Hira fingotra - inona izany, ny karazany, ahoana no hamoronana sary kanto?
Sinulox ho an'ny saka